Iyo beta 7 yewatchOS 3.2 inowanikwawo kune vanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 7 beta 3.2 inowanikwawo kune vanogadzira
Ino nguva watchOS beta haina kuperekedzwa neTVOS beta uye izvi zviri kutanga kuva mutambo wenguva dzose weshanduro uye kuburitsa kupurinda zvidiki zvidiki zveeshanduro dzakasiyana dzeApple's OS. Ino nguva yatinayo watchOS 7 yekuvandudza beta 3.2 uye yaburitswa padivi peMacOS Sierra vhezheni 10.12.3 masikati ano. Hatigone kudzora kuvhurwa kweshanduro yekupedzisira mukati mevhiki chero, asi chinhu chakajairika ndechekuti isu tiende svondo rinouya neshanduro yekupedzisira yeApple Watch inoshanda sisitimu.
Iyo watchOS 3.2 beta inogona kutorwa pasi kuburikidza neiyo iPhone uye inowedzera iyo sinema modhi seyakanyanya ruzivo mukuwedzera kune zvakajairika bug kugadzirisa uye kugadzirisa mukugadzika kwesisitimu. Parizvino zvinofanirwa kuve neawa nehafu yebhatiri uye yakabatana nechaja kuti ugone kuisa iyi beta nyowani asi zvirinani kusa gadziridza kune beta vhezheni sezvo pasina sarudzo yekudzokera kuitira kana zvikatadzakana, dambudziko rekuenderana neapp kana zvimwe zvakafanana, saka zvakanaka kuti ugare kure neshanduro dze beta dzeApple Watch.
Pamusoro pegadziriro dzebug uye vamwe, iyo "cinema modhi" uye SiriKit yakawedzerwa, mashoma mashoma maficha ayo anonyatso kuuya anobatsira kune Apple vanopfeka vashandisi, avo kweimwe vhiki vanoona kuti iyo yekupedzisira vhezheni yesystem nyowani haisvike kushanda. Ngatione kana svondo rinouya iri rekupedzisira kana isu tichiona izvo zvekuvandudzwa svondo rino ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 7 beta 3.2 inowanikwawo kune vanogadzira
Ipa yako AirPods kubata kwemavara uye kanganwa nezve kurasikirwa navo
Mangwana chitoro chepamhepo cheApple chichavharwa kwemaawa mashoma.Zvigadzirwa zvitsva?